I-meadow, eduze nehlathi, eduze kolwandle - I-Airbnb
I-meadow, eduze nehlathi, eduze kolwandle
De Koog, Noord-Holland, i-Netherlands
Igumbi e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Miko
U-Miko Ungumbungazi ovelele
Jabulela i-Texel ngamehlo omuntu wendawo futhi uphumule endaweni emangalisayo maphakathi ne-De Koog. Ngingu-Miko, i-surfer, futhi ngakhulela e-Texel. Ngemva kohambo oluningi oluya phesheya, ngiye ngazisa kakhulu ubuhle besiqhingi. Futhi manje ngifuna ukwabelana ngalokho nabantu abaningi ngangokunokwenzeka. I-Miko bed/isidlo sasekuseni imelela ukuhlala okukhanyisa uthando lwami lwebhishi nolwandle endlini ehlukile. Ku-miko bed/isidlo sasekuseni uzobona i-Texel emangalisayo.
E-De Weide, kumayelana nendawo nokukhanya, okuthile ongeke ukuphuthelwe yi-Texel! Siyazi ukuthi indawo yasemaphandleni igcwele izimvu noma izimbali kodwa futhi namadlelo agcwele ama-lavender. Kuleli kamelo, uzothola konke lokho, kusukela enqolobaneni yezimvu kuya odongeni lwe-moss kanye nombhede otshuzayo kuya ekubukeni kwezingulube nama-rawiti.
Jabulela i-Texel ngamehlo omuntu wendawo futhi uphumule endaweni emangalisayo maphakathi ne-De Koog. Ngingu-Miko, i-surfer, futhi ngakhulela e-Texel. Ngemva kohambo oluningi oluya phesheya, ngiye ngazisa kakhulu ubuhle besiqhingi. Futhi manje ngifuna ukwabelana ngalokho nabantu abaningi ngangokunokwenzeka. I-Miko bed/isidlo sasekuseni imelela ukuhlala okukhanyisa uthando lwami lwebhishi nolwandle endlini ehlukile. Ku…
4.78 (izibuyekezo ezingu-76)
UMiko Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- De Koog namaphethelo